Air Seychelles dia mandefa Airbus A320neo vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Air Seychelles dia mandefa Airbus A320neo vaovao
Airlines • Airport • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Maorisy • Vaovao • Seychelles Madagascar Malgache • Fitaterana • Vaovao isan-karazany
Aogositra 12, 2019
Air Seychelles CEO - 2nd left - with partners in Mauritius and Airbus marketing - Photo CC-BY
Ny fahatongavan'ny fiaramanidina Airbus A320neo faharoa ho an'ny Air Seychelles ny volana febroary na martsa amin'ny taona ho avy dia hanatsara ny fifandraisana eo amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina, hoy ny talen'ny mpitantana ny kaompaniam-pitaterana.
Remco Althuis dia niresaka tany Maorisy tamin'ny lanonana fanokafana voalohany ny fiaramanidina Airbus A320neo voalohany an'ny Air Seychelles tamin'ny Alakamisy.
"Ny Airbus A320neo fanampiny amin'ny lohataona amin'ny taona ho avy dia hitondra ny sambonay ho fiaramanidina fito izay hahafahantsika mampifandray ireo nosy any amin'ny nosin'i Seychelles ary koa mampifandray ireo firenena nosy aty amin'ny Ranomasimbe Indianina," hoy i Althuis.
Ny Airbus A320neo voalohany an'ny kaompaniam-piaramanidina, antsoina hoe 'Veuve,' dia noraisina tamina sidina voalohany ho any amin'ny nosy akaiky an'i Mauritius tamin'ny alàlan'ny firoboroboan'ny tafondro rano rehefa tonga tao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Sir Seewoosagur Ramgoolam.
Cocktail fankalazana iray tao amin'ny Receptorium of the Mauritius (AML) no notontosaina niaraka tamin'ny tompon'andraikitra ambony, mpiara-miombon'antoka lehibe, ary ny varotra fizahan-tany eo an-toerana ary ny solontenan'ny haino aman-jery avy any Maurice sy Seychelles.
Ny fiaramanidina izay tonga tao Seychelles, vondrona nosy 115 any amin'ny faritra andrefan'ny Ranomasimbe Indiana, ny herinandro lasa teo no voalohany ho an'ny faritra sy ho an'i Afrika.
Nilaza i Althuis fa mifantoka amin'ny tamba-jotra isam-paritra ny Air Seychelles noho ny herin'ny tsena fiaramanidina manerantany izay tena mifaninana sy ampiasain'ny mpitatitra lehibe toa ny British Airways, Qatar Airways, Air France ary Emirates.
Air Seychelles amin'izao fotoana izao dia manana sidina isan'andro mankany Johannesburg, sidina enina isan-kerinandro mankany Mumbai, sidina fizaran-taona mankany Madagascar ary sidina dimy isan-kerinandro mankany Maurice.
Ny tale jeneralin'ny Air Seychelles dia nilaza tamin'ny alàlan'ny seza 168, ny fiaramanidina vaovao dia hampitombo ny isan'ny mpandeha ihany koa.
"Ny A320neo dia manana seza 24 isan-jato mihoatra ny A320ceo ankehitriny izay midika fa hahafahanay mitondra mpandeha betsaka kokoa handeha eo anelanelan'ny firenena nosy roa misy antsika ary hahazo tombony bebe kokoa."
Na izany aza, nilaza izy fa ny tena fiantraikan'ny fahatongavana vaovao dia tsy ho hita eo noho eo amin'ny sidina isan'andro rehetra, fa miadana kosa.
"Tsy maintsy miandry ny fiaramanidina faharoa amin'ny lohataona ho avy isika vao afaka mampiasa ny lalantsika rehetra miaraka amin'ity fiaramanidina ity amin'ny fotoana rehetra," hoy i Althuis.
Nanampy izy avy eo fa tsy ho voafetra ho an'ny faritra ihany ny tombony.
Manoloana azy, ny minisitry ny fizahantany any Maorisy, Anil Kumarsingh Gayan, dia nilaza fa ny fifandraisan'ny rivotra dia zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ireo nosy roa ary io no tokony ho ifantohan'ny governemanta isam-paritra.
“Misy ny fangatahan'ny olona any amin'ny faritra mba hanana fiaramanidina bebe kokoa miasa eo anelanelan'ireo nosy. Fantatro fa governemanta efatra ao amin'ny Ranomasimbe Indianina no miasa mba hanana pasiteran'ny Ranomasimbe Indianina hahafahan'ny olona mivezivezy amin'ny nosy iray mankany amin'ny iray hafa, "hoy i Gayan.
Nanampy izy fa "tsy haiko ny antony mitaky fotoana lava loatra nefa manantena aho fa hitranga tsy ho ela izany ary hampiakatra ny fisian'ireo mpitatitra hafa ao amin'ny faritra ary hahafahan'ny olona mivezivezy eo amin'ireo nosy."
Air Mauritius dia nanohy ny sidina indroa isan-kerinandro nankany Seychelles tamin'ny Jolay tamin'ity taona ity.
Sandals Foundation dia manome mba hamerenana amin'ny laoniny ny Reef Smith ...
Minisitry ny fizahantany ao Jamaika: Hamafisina ny ezaka atao ...
Flynas dia nanambara ny fahatarana amin'ny sidina mivantana eo anelanelan'ny KSA ...
Lisitr'ireo toerana misokatra eto Bangkok noho ny ...
Ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena San Diego dia nanolo-tena ho 100 isan-jato ...
Gastronomika maharitra ao amin'ny Nosy Seychelles